“၅နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရပေမဲ့ မိဘတွေကို စိတ်မနာ ခဲ့ပါဘူး “- ဦးဇင်းအရှင်ကောဏ္ဍည – MC Tv Club
“၅နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရပေမဲ့ မိဘတွေကို စိတ်မနာ ခဲ့ပါဘူး “- ဦးဇင်းအရှင်ကောဏ္ဍည
အသက်၅နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းအရှင်ကောဏ္ဍညက စွန့်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ မိဘတွေ ကို စိတ်မနာပါဘူးလို့ မိန့်ပါတယ်။
“လူတချို့ကမေးကြတယ် ။ဦးဇင်း မိဘတွေကထားခဲ့တာ ။အဲ့မိဘတွေကို စိတ်ဆိုးလား စိတ်နာလားလို့မေးကြတယ် ။အော်. ဒါသိချင်တော့ဖြေရတာပေါ့နော်. ။သာမန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်နာစရာ စိတ်ဆိုးစရာပေါ့နော် ။ဒါပေမယ့် မိမိကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မဆိုး စိတ်မနာပါ ။
မွေးပေးပီးလူ့လောကထဲရောက်ပို့ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အတူတကွမနေရတာကတော့ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ့နော် ။ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့မရသလို အပြစ်ပုံချလို့လည်းမရပါ။ အတိတ်ကံ ပြုခဲ့သောကံ အခုခံရမယ် ။နောင်ဘဝကောင်းခြင်ရင်တော့ အခုကတည်းက ကောင်းတာလုပ်ကြပေါ့။ ဦးဇင်းကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်ညိုးထိုး၍မပြောပါဘူး.။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာဘဲမဟုတ်လား ။ကျန်းမာချမ်းသာစွာသာသနာပြုနိုင်ပါစေ ။မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နိုင်ကြပါစေ” လို့ ဦးဇင်းလေးက သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ မိန့်ပါတယ်။ ဦးဇင်းလေးက ငယ်စဉ်ကာလက မိဘတွေ မရှိတော့ အနှိမ်ခံခဲ့ရတာတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Zawgyi/အသက်၅နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းအရှင်ကောဏ္ဍညက စွန့်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ မိဘတွေ ကို စိတ်မနာပါဘူးလို့ မိန့်ပါတယ်။
“လူတချို့ကမေးကြတယ် ။ဦးဇင်း မိဘတွေကထားခဲ့တာ ။အဲ့မိဘတွေကို စိတ်ဆိုးလား စိတ်နာလားလို့မေးကြတယ် ။အော်ဒါသိချင်တော့ဖြေရတာပေါ့နော်. ။သာမန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်နာစရာ စိတ်ဆိုးစရာပေါ့နော် ။ဒါပေမယ့် မိမိကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မဆိုး စိတ်မနာပါ ။မွေးပေးပီးလူ့လောကထဲရောက်ပို့ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အတူတကွမနေရတာကတော့ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ့နော် ။ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့မရသလို အပြစ်ပုံချလို့လည်းမရပါ။
အတိတ်ကံ ပြုခဲ့သောကံ အခုခံရမယ် ။နောင်ဘဝကောင်းခြင်ရင်တော့ အခုကတည်းက ကောင်းတာလုပ်ကြပေါ့။ ဦးဇင်းကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်ညိုးထိုး၍မပြောပါဘူး.။
Next Article ကမ္ဘာကျော်ဘောက်ဆင်သမား ပက်ကီယို သမ္မတနေရာတွင် ရွေးကောက်ခံမည်